Haweeneey ku eedeeysneyd Al-Shabaab oo isu dhiibtay Booliiska Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Haweeneey ku eedeeysneyd Al-Shabaab oo isu dhiibtay Booliiska Kenya
Haweeneey ku eedeeysneyd Al-Shabaab oo isu dhiibtay Booliiska Kenya
Nairobi-(SNTV)-Mumina Eroba oo ay Boliiska Dalka Kenya Madaxeeda dul dhigeen Hal Milyan oo Shilin Bil ka hor ayaa Maqribnimadii Talaadada isku dhiibtay laamaha ammaanka ee Dalkaasi.
Haweeneydan ayaa lagu tuhmayay in ay ka tirsan tahay Al-Shabaab, waxaana lagu eedeeyay in ay wax ka qorsheysay weerarkii Bishii Febuary ee Sanadkan ka dhacay Tuulada Qarsa oo ka tirsan Wajeer, halkaasoo ay ku dhinteen Saddex Qof oo Laba ka mid ihi ay ahaayeen Macallimiin.
Isku duwaha Gobolka waqooyi-bari Dalka Kenya, Maxamuud Saalax ayaa Jariiradda The Star u sheegay in isa soo dhiibista Haweeneydani ay guul weyn u tahay dagaalka lagula jira argagixisada,
Mss; Eroba, ayaa ah Hooyada Cabdiwaaxab Cusmaan Axmed, oo isna lala xiriirinayo weerar ay ku dhinteen Siddeed Askari oo ka dhacay Wajeer, waxanay sidoo kale hay’adaha amnigu weli raadinayaan Axmed Debar, oo ka mid ah eedeysanayaasha.
Dowladda Kenya ayaa wadda qorshe lagu wacyi gelinayo Bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku aaddan sidii looga feejignaan lahaa xubnaha Dadka ka dhaadhiciya fekerka Argagixisanimada ee ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo ay Dowladda Kenyana ku guuleysatay inay dib ugu soo laabtaan Dhallinyaro badan aragtiyadii hore.
Previous articleKenya oo laga dalbaday in ay Qaxootiga u ogolaato in ay si xor ah u Ganacsadaan
Next articleMadaxweyne Farmaajo “Mucaarad waan u baahannahay”